सुदूरपश्चिमको साझा अस्पताल बनाउँछु - Karobar National Economic Daily
सुदूरपश्चिमको साझा अस्पताल बनाउँछु
query_builderMarch 17, 2017 11:16 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility944
डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल अध्यक्ष, लक्ष्मण सिंह । तस्विर : काराेबार
सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने भन्दै जति चर्चा भए पनि बिरामीको गुनासो घटेको छैन । टिम नेपाल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लामो समय सञ्चालन गरेको तत्कालीन टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताल डडेलधुरा मर्ज भई उपक्षेत्रीय अस्पताल बने पनि यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
डडेलधुरा सदरमुकाम तुफानडाँडास्थित डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दासम्म घोषित उद्देश्यअनुसारको उपचार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भनेर स्थानीयले नै आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरकारले २०७२ साल असोज १५ गतेदेखि उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरेपछि अहोरात्र अस्पतालको विकास र स्तरोन्नतिका लागि क्रियाशील अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सातवटै पहाडी जिल्लाको रिफरल हस्पिटल बनाउन ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्छन् ।
अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेका सेवा–सुविधा, अस्पतालको आगामी योजना र स्तरोन्नतिलगायतका विषयमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सिंहसँग कारोबारका लागि हरिश चन्दले गरेको कुराकानी :
डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिको नेतृत्व गर्नुभएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । तपाईंले अस्पतालका लागि के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो ?
सरकारले २०७२ साल असोज १५ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरे पनि मैले पद बहाली गरेर २०७२ साल असोज २७ गतेदेखि काम सुरु गरेको हुँ । यस अवधिमा थुप्रै उल्लेखनीय काम भएका छन् ।
जो–कसैले पनि पहिलेको अस्पतालको अवस्था र हालको अवस्थाबीचको अन्तर हेर्ने र निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्ने हो भने भएका काम–कारबाहीको सहजै मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ ।
उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसके पनि जिल्ला अस्पतालकै संरचनामा सञ्चालित यस अस्पतालको तत्कालीन अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो । अस्पताल आमसरकारी अस्पतालजस्तै नाजुक अवस्थामा रहे पनि डडेलधुरा जिल्ला र खासगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सातवटै पहाडी जिल्लाका आमसर्वसाधारणको भने अस्पतालबाट निकै अपेक्षा र आशा थियो ।
आमनागरिकबाट अपेक्षा गरिएजस्तो सेवा प्रवाह गर्न न त पर्याप्त जनशक्ति थियो, न उपकरण र ल्याबको प्रबन्ध । २ जना डाक्टर र कुल २३ जना स्वास्थ्यकर्मीको टिम कार्यरत थियो ।
जिल्लावासीले लामो लडाइँ लडेर स्थापना गरेको अस्पताल केवल घोषणामा मात्रै सीमित थियो, मानौं कि साइनबोर्डमा उपक्षेत्रीय अस्पताल सीमित थियो । दैनिक ३०÷४० जना बिरामी आउँदासमेत उपचार सेवा दिन कठिनाइ थियो ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा उपक्षेत्रीय अस्पतालको संरचनाअनुरूप चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दीदेखि उपकरण, औषधि र ल्याब व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालनी गरेको हुँ ।
सबैको सहयोगले हाल उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ४ जना विशेषज्ञसहित २० जना डाक्टर र १ सय ५ जना स्वास्थ्यकर्मी स्थायी दरबन्दी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । अझै थप विशेषज्ञ डाक्टर र शल्यचिकित्सकका लागि पहल गरिरहेका छांै ।
जनशक्ति आपूर्ति हुँदैमा काम भइहाल्छ भन्ने होइन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनमा समेत अस्पताल विकास समिति कटिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणकै कुरा गर्ने हो भने पनि अल्ट्रासाउन्ड, ईसीजी, सीआर, फिजियोथेरापी, ब्लड कल्चर मेसिन, सिडीफोरलगायतका मेसिन उपकरणहरू जडान गरिएका छन् ।
अत्याधुनिक ल्याबको व्यवस्थापन गरिएको छ । दैनिक ३०÷४० जना बिरामी नआउने अस्पतालमा हाल दैनिक ३ सयदेखि ४ सय बिरामीले उपचार गराइरहेका छन् ।
अस्पताल भवन जीर्ण अवस्थामै छ, अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ नि ?
अस्पताल वरपर हिलाम्मे अवस्था थियो, अस्पतालसम्म पुग्ने सडकको दुरवस्था कस्तो थियो ? कसैबाट लुकेको छैन । हामीले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय डोटीलाई आग्रह गरेर अस्पताल बाउन्ड्री र सडक पिच गराउन सकेका छौं ।
जीर्ण अस्पताल मर्मत–सम्भार गरिएको छ । हरेक वार्डमा एसी जडान गरेका छौं । तत्कालीन टिम अस्पताल व्यवस्थापन गरिरहेको संस्था एसडीसीएसले अधुरो छाडेर गएको अस्पताल भवनलाई मर्मत–सम्भार गरेर नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौं, यो सेवा चाँडै सुचारु हुनेछ ।
यसबाहेक १ सय शय्या क्षमताको नयाँ अस्पताल भवन निर्माणका लागि निर्माणस्थलको माटो परीक्षणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । चाँडै निर्माण कार्य अघि बढाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय डोटीले पहल गरिरहेको छ ।
अस्पताल व्यवस्थापनले महसुस गरेको विषय पनि यही हो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सेवा–सुविधाका हिसाबले उपक्षेत्रीय अस्पताल सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सात पहाडी जिल्लाको रिफरल अस्पतालका रूपमा विकसित भइसकेको छ, तर भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ ।
विभिन्न निकायसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने योजना हामीले बनाएका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका साथै अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने चाँडै यो अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधार विकासका हिसाबले समेत नमुना बनाउन सकिन्छ ।
अस्पतालको विकास र स्तरोन्नतिका लागि यहाँले सबै क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ त ?
म जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मीलगायत समस्त जिल्लावासी महानुभावहरूप्रति अभारी छु । मैले जिल्लास्तरका सबै क्षेत्रबाट निकै सहयोग पाएको छु ।
यसबाहेक सरकारसँग माग राख्ने र बजेट व्यवस्थाका लागि यस जिल्लाको जनप्रतिनिधिका हैसियतले समेत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू र वरिष्ठ समाजसेवी सांसद डा. आरजु राणा देउवाज्यूप्रति निकै कृतज्ञ छु ।
मैले अस्पतालको समस्या लगेर माग राख्दा उहाँहरूले सबैसँग सहयोगका लागि भनिदिनुहुन्छ । अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रेरणाको स्रोत नै उहाँहरू हुनुहुन्छ ।
जिल्लावासीलाई मात्र नभई सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सात पहाडी जिल्लाका आमनागरिकका लागि प्रभावकारी अस्पताल बनाउन उहाँहरूले निकै कसरत पनि गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूकै कारण हामीले योजना निर्माण गरेर अघि बढाइएका हरेक काम सफल भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वदायी पदमा जुझारु मन्त्री गगन थापा हुनुहुन्छ । उहाँबाट आमजनमानसलाई धेरै आशा छ । स्वास्थ्यसेवाको सहज पहुँच तथा गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने कुरामा अहिलेको नेतृत्वबाट गहन छलफल तथा नीति निर्माण हुनेछ भन्ने आशा आममानिसमा छ ।
त्यो साकार भएमा हामी सबै गुणस्तरीय सेवाबाट लाभान्वित हुने थियौं र स्वास्थ्यसेवाको अभावले अकालमा कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि युवामन्त्री थापाले अत्यन्तै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ ।
उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सरकारी अस्पताल अनुदान निर्देशिकाले समेत सहर केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित अस्पताललाई बढी राहत दिइरहेको छ । हालै मात्र मन्त्रालयबाट फोन आएको थियो ।
अस्पतालका लागि आवश्यक योजना तत्काल पठाउनुहोस्, बजेटको चिन्ता छैन भन्ने खबर आएको छ, हामी योजना निर्माण गरेर अघि बढ्छांै । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति कठिनाइ छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अस्पतालमा सेवा विस्तार हुँदै जाँदा अस्पताल आमसर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुगिरहेको, सेवा–शुल्क महँगो भइरहेको र विपन्न समुदायले उपचार सेवा नै पाउने अवस्था नरहेको गुनासोसमेत बढ्दै छ नि ?
स्वास्थ्यसेवा संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक हो । विदेशमा नागरिकले तिरेको सामाजिक सुरक्षा करबाट उनीहरूले स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्छन् । नागरिकले तिरेको करले देशको व्ययभार सम्हाल्नसमेत अपुग भएको देखिन्छ । दूरदराजका आमनेपालीले सामान्य औषधि उपचार पाउन मुस्किल परिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार हरेक नागरिकले बिरामी भएको ३० मिनेटभित्रमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई जनताले ‘अनुभूति गर्ने गरी’ सेवा प्रवाह गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले भर्खरै एउटा राम्रो नीति लियो । निजी तथा अन्य गैरसरकारी स्वास्थ्यप्रदायकले अस्पतालले विपन्न तथा गरिबलाई आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने । सोही अनुसार लागू गर्न पुस १ गतेबाट निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी अस्पताल भएकाले हामी सरकारी नीतिविपरीत हुने कुरा आउँदैन । तपाईं लेखेर राख्नुहोस्, देशभरिका सबै सरकारी अस्पतालको तुलनामा हामीले सेवा–शुल्क सबैभन्दा सस्तो लगाएका छौं । नेपालको कुनै पनि सरकारी अस्पतालले यस्तो सेवा प्रवाह गरेको छैन । कानुनअनुसार रिफरल अस्पतालमा निःशुल्क औषधि र स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गरिँदैन, तर हामीले निःशुल्क सेवा व्यवस्थित रूपले सुचारु गरेका छौं ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २ हजार ९ सय ६३ जना विपन्न, असहाय, जेष्ठ नागरिक र अशक्त नागरिकको उपचारमा १२ लाख ४२ हजार ६३ हजार निःशुल्क उपचार र औषधिमा खर्च गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै ५० हजार बिरामीको उपचार गरिएकोमा ६ हजार ८ सय ९० जनाको निःशुल्क उपचार गरिएको छ । निःशुल्क उपचारका लागि १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ ।
अस्पतालमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप छ नि ?
यो सबै वाइयात कुरा हो । अस्पताललाई बदनाम गर्ने नियतका साथ केही सीमित व्यक्तिले यस्तो दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । अस्पताल विकास समितिमार्फत संकलन हुने रकम हरेक दिन बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेका छौं ।
यस्तै रकमबाट हो, हामीले विपन्न तथा असहाय बिरामीको निःशुल्क उपचारमा सहयोग गर्ने । अस्पताल विकास समितिको आर्थिक विषयसँग कुनै संलग्नता छैन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । समिति स्वयम्सेवक ढंगले काम गरिरहेको छ ।
समितिको अध्यक्ष मैले आर्थिक स्वार्थले काम गरिरहेको होइन । पुख्र्यौली सम्पत्तिबाटै मलाई चलिरहेकै छ । आमसर्वसाधारणका लागि केही काम गरौं भन्ने उद्देश्यले मैले अस्पताल विकास समितिको नेतृत्व स्वीकार गरेको हुँ ।
नियमानुसार अस्पतालको खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि अस्पतालका सबै खाता कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा कर्मचारी तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, औषधि–उपकरण खरिदलगायतका क्रियाकलापहरू आर्थिक नियमावलीअनुसार टेन्डर प्रक्रियामा सम्पन्न गरिन्छन् भने अस्पताललाई अन्य निकायबाट प्राप्त हुने बजेट समेत टेन्डर प्रक्रियाअनुसार खर्च गरिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा काम गर्ने मान्छेको मनोबल नै गिराउने गरी अनावश्यक आरोप लगाइनु हुँदैन । केही व्यक्तिले व्यक्तिगत ईष्र्याका आधारमा अख्तियारमा समेत उजुरी गरेका रहेछन्, तर गल्ती भएको भए त कारबाही भइहाल्थ्यो नि ।
आगामी दिनमा अस्पताललाई अघि बढाउन कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
अस्पतालमा इन्डोस्कोपी र सिटीस्क्यान मेसिन जडान गर्न बजेट निकासा भइसकेको छ, चाँडै टेन्डर भएर दुवै मेसिन जडान गरिनेछन् । वरिष्ठ समाजसेवी तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवाज्यूको पहलबाट नेपाल युथ फाउन्डेसन र रुडुकमार्फत झन्डै ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा पोषण पुनःस्थापना केन्द्र भवन निर्माण गरेर सेवा आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
मैले अघि नै भने, न्युरो विशेषज्ञ र एक जना वरिष्ठ सर्जनको व्यवस्था गरेर शल्यक्रिया सेवा सुचारु गर्न सकिएमा उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणाका सबै उद्देश्य पूरा हुने र रिफरल अस्पतालस्तरको अस्पताल बनाउने अभियान सम्पन्न हुनेछ ।
यी सबै उपलब्धि हासिल गर्न हामीले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । हामी त्यसैमा केन्द्रित पनि छौं । सरकारले पुनः थप एक कार्यकाल सेवाको अवसर प्रदान गरेमा चाँडै यस अस्पताललाई वास्तवमै उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाउन सकिने कुरामा म दृढ छु ।
डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कस्तो बनाउने योजना छ ?
अस्पतालले मानिसको पीडा, वेदना, खुसी, जीवन र मृत्युसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्छ । मानिसलाई जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त हरेक रोगसँग लड्नका लागि अस्पतालको सहारा चाहिन्छ ।
आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको एक उत्कृष्ट नमुना हो— अस्पताल र चिकित्सा पद्धति । यस प्रकारको विज्ञान र प्रविधियुक्त थलोको सञ्चालनमा खट्ने प्रशासनिक कर्मचारीमा समेत सीप, ज्ञान, दक्षता, सुझबुझ र योग्यताको सम्मिश्रण हुनु अपरिहार्य छ । टिकट काउन्टरदेखि परीक्षण गर्ने व्यक्तिले बिरामीको मन जित्ने खालको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके बिरामीको मनोविज्ञानमा सकारात्मक छाप पर्छ ।
कतिपय रोग निको पार्न मनोविज्ञानको गहन भूमिका हुन्छ । प्रायः अस्पतालमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीले केवल विद्यालय, क्याम्पसको औपचारिक शिक्षाबाहेक अन्य कुनै पनि तालिम वा विशेष सीप, ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएका हुँदैनन् । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत हामीले हाम्रा उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौं भन्नेमा दुईमत रहँदैन ।
हामीले उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरालाई आमसर्वसधारणको साझा अस्पतालका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौं । अस्पतालको समग्र विकासका लागि हामीसँग पर्याप्त चुनौती छन् । चुनौतीसँगै अवसर पनि थुप्रै छन् ।
हामीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लाबाट उपचारका लागि खर्च भइरहेको लाखौं रकम भारतीय सहर वा राजधानी र तराईका जिल्ला जानबाट जोगाउन सक्छौं भने यसले विकट पहाडी जिल्लामा पर्याप्त सुधारको अनुभूति हुनेछ ।
हामीले अस्पताललाई विकास गरेर अघि बढ्न मात्र सक्यौं भने डडेलधुरा जिल्लाको आर्थिक विकासमा समेत यसले कायापलट गर्छ । व्यवसायीले सरसमान बेच्न पाउँछन्, होटलले ग्राहक पाउँछन्, सवारी साधनले यात्रु पाउँछन् । यसले बहुआयामिक आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ ।
अवसर र चुनौतीका रूपमा रहेको अस्पतालको विकास र स्तरोन्नति अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सामूहिक प्रयत्न, उपलब्धिमूलक सहकार्य र लगनशीलता आवश्यक छ । सबैबाट विगतमा जस्तै कुशल सहकार्यको अपेक्षा राखेको छु ।
आमसर्वसधारणमा मेरो अनुरोध छ, अस्पतालले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, अस्पतालले प्रवाह गरेका सेवा उपयोग गर्न पूर्ण विश्वासका साथ अस्पतालमा आउनुहोस् । थप सेवा विस्तारका लागि सबैको सहयोगमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।